Kambodza-Thailandy : Mitohy ny fifandirana manodidina ny fiangonana Preah Vihear · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2018 2:19 GMT
Ny fiangonana tranainy Preah Vihear, izay, araka ny voalazan'ny UNESCO, niorina tamin'ny taonjato faha-9 ary natokana ho an'i Shiva, dia hita ao amin'ny sisintany manelanelana an'i Kambodza sy Thailandy. Loharano nipoiran'ny fifandirana teo amin'ireo firenena roa mpifanolo-bodirindrina ireo ny fananana tanteraka an'i Preah Vihear. Tamin'ny taona 1962, Ny Fitsaràna iraisam-pirenena, namaly ny fangatahan'ny governemanta Kambodziana, dia nametraka hevitra fa miorina eo amin'ny tanin'i Kambodza ilay fiangonana. Tamin'ny volana Jolay 2007, nanendry ilay fiangonana ho toy ny toerana noheverina ho Harenan'izao tontolo izao ny UNESCO, noho ny “fananany haimaritrano tsy manam-paharoa”.
Sarin'ny paniek eo amin'ny flickr.
Nanomboka tamin'ny nanoratan'ny UNESCO azy tamin'ny taona 2008 no nitrangan'ireo fifandonana tao amin'ny faritra, teo amin'ireo miaramila Kambodziana sy Thailandey. Na izany aza anefa, araka ny voalazan'ny gazety The Mirror, marobe ireo olom-panjakana Kambodziana no nandà hoe tsy ny fanoratan'ny UNESCO azy no fototr'ireo fifandonana ireo. Mitaky ny fijeren'ny UNESCO indray ny fanoratana azy i Thailandy mba ho samy hitantana ilay Fiangonana avokoa na i Thailandy na i Kambodza. Manamarika ny gazety The Mirror fa:
Nefa raha tsy manao tatitra mikasika ny vokatr'io fanoratana io ny fampahalalam-baovao, ny governemanta kosa, tetsy ankilany, dia tena mahalala tsara ilay fanendren'ny UNESCO. Vao haingana no nankalaza ny tsingerintaona voalohany mikasika ilay fanaovantsonia ny governemanta Kambodziana tamin'ny alalan'ireo dihy sy ireo lahateny. Azo nojerena tao amin'ny blaogy Monkgol sy Khmerization ny sary.
Nadika tamin'ny tambajotra ihany koa ny fifankahalàna nisy teo amin'ireo firenena roa, toy ny fanamarihana nataon'i Kounila Keo tao anaty lahatsorany manao hoe “Tiako ny Khmer vs. Tiako i Thailandy” mikasika ireo vohikala mifaninana ilovethailand.org sy ilovekhmer.org.
Ny blaogy Details are Sketchy (bilaogy efa nakatona), miaraka amin'ireo fanehoankevitry ny ThaRum, dia mitatitra fa nosakanana ny vohikala ilovethailand.org ao Kambodza, saingy tsy mazava hoe iza no nisakana azy.
Raha mbola mitohy ireo fifankahalàna, ampangain'i Sopheap Chak ny Association of Southeast Asian Nations [Fikambanan'ireo fanjakana ao Atsimo-Atsinanan'i Azia na ASEAN] ho tsy nahatanteraka ny asany amin'ny “fampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny filaminan'ny faritra”. Tao anaty matoandahatsoratra iray navoakan'ny masoivoho UPI Asia, manoratra i Chak fa tsy azo ekena ny tsy fihetsehan'ny ASEAN manoloana ny raharaha Preah Vihear. Manoratra i Chak fa: “toa tsy misy dikany fotsiny izao ny ASEAN raha vao resaka ny fiarovana an'ireo firenena mikambana ao anatiny… ary ny tsy fisiana hetsika dia hidika fa tsy ho afaka hitohy ny fiheverana ny ASEAN ho toy ny fikambanana iray lohalaharana aty amin'ny faritra”.